Gabriel Martinelli Oo Farriin U Diray Tababare Arteta Isagoo Sidoo Kale Sheegay Laacibka Uu Ku Daydo – Garsoore Sports
Gabriel Martinelli Oo…
Gabriel Martinelli ayaa ku adkeysanaya inuu kasoo kabtay dhawicii dhowaanahan uu ku maqnaa isla markaana uu diyaar u yahay inuu nolol cusub ka billaawo weerarka foosha xun ee Arsenal kahor kulanka Axada ee Premier League oo ay la ciyaarayaan Leeds United.
Da’yarkan reer Brazil ayaa indhaha jamaahiirta kubbada-cagta soo jiitay xilli ciyaareedkii hore, laakiin dhaawac halis ah oo jilibka ah ayaa xaddiday saameynta uu ku yeelan karo shaxda tababare Mikel Arteta.
Martinelli ayaa soo gabagabeeyay sagaal bilood oo uu dhaawac ku maqnaa markii uu ciyaaray kulankiisii ​​soo laabashada ee Manchester City ee Carabao Cup bishii December.
Waxa uu intaasi kaddib ka soo muuqday kulankii Boxing Day ee ay ka badiyeen Chelsea iyo guushii ay ka gaadheen Brighton, laakiin waxa soo gaaray dhaawac kale oo anqawga ah intii lagu jiray is kululeynta kahor cayaartii FA Cup ee wareega saddexaad ee Newcastle.
19 jirkaan billowgiisii ​​ugu dambeeyay ee Premier League wuxuu yimid bishii hore kulankii ismari waaga ahaa ee kooxda Arsenal ay la cayaartay Manchester United balse qeybtii dambe ayaa beddel lagu saarray.
Macalin Arteta ayaa lagu dhaleeceeyay kaddib markii uu keydka uga tagay da ‘yarkan markii kooxdiisa ay ceyrsaneysay gool ay kulahayd kooxda Aston Villa kulankii guuldarrada soo wajahay ee dhammaadka usbuucan.
Martinelli ayaa og in fursadihiisa soo billaawashada ay yar tahay iyadoo kabtanka kooxda Pierre-Emerick Aubameyang uu ka cayaarayo garabka biddix ee seddax weerar ah, laakiin wuxuu ku adkeysanayaa in laacibkan caalamiga ah ee Gabon uu matalayo qofka ugu habboon ee ku dayashada mudan wuxuuna rajeynayaa inuu raaco raadkiisa.
Martinelli ayaa isagoo u warramaya ESPN waxaa uu yiri: ‘Aad baan u cabsanayay. Runtii waxay ahayd waalli! (Inaan ka imaado heerka 4aad ee Brazil ilaa heerka koowaad ee Ingiriiska iyo Arsenal) Laakiin hadda waan la qabsaday.
‘Waxaan dareemayaa wanaag aad u wanaagsan. Ma dareemayo xanuun kale jilibka ah waana tan ugu muhiimsan. Waxaan diyaar u ahay (inaan ciyaaro) markii Mikel uu ii baahdo. ‘Waxaan u shaqeeyaa si aad ah (si aan usoo billaawdo) dabcan Auba wuxuu ka ciyaaraa booskeyga laakiin waan fiirsadaa isaga maalin kasta, tababar kasta, si aan wax uga barto, sidoo kale garoonka banaankiisa xitaa waa nin weyn ‘Waxaan rabaa inaan raaco wadadii Aubameyang, isagu waa kabtan, wuxuu xirtaa maaliyada 14aas, taasi waxay dabcan astaan ​​u tahay kooxdan dabcan, waxaan rajeynayaa inaan guulo badan ka gaaro Arsenal.’
Real Oo Mushahar Dhimis Ka Codsatay Ramos Si Ay U Siiyaan Bale